Nhau - Zvakanakira zvishanu zvemabhodhoro egirazi mumusika wepakeji
Parizvino, mundima yekupakata yemusika wepamba, zvigadzirwa zvekutakura zvakasiyana siyana, kunyanya mapurasitiki (chimiro: chakagadzirwa nebwe, plasticizer, stabilizer, ruvara) kuputira mabhodhoro, inotora hafu yemusika wepasi-wekupedzisira muindasitiri yezvinwiwa. Jiangshan, kunyanya nekuda kwemutengo wakaderera, kutakurwa kwechiedza, uye nyore kudzokorodza mabhodhoro epurasitiki. Dambudziko re phenol A (Emerson) mumabhodhoro epurasitiki ayo akafumurwa kazhinji ari kukonzera vatengi vazhinji (Vatengi) vanoteerera zvakanyanya zvinwiwa zvakaputirwa mumabhodhoro egirazi pavanosarudza zvinwiwa zvekushandisa. nekuti girazi remabhodhoro ekurongedza haringoratidzi chete mamiriro epamusoro, asi zvakare rapfuura iyo (tōng guò) yenyika yemhando yekutarisa dhipatimendi reKuongorora chinhu chekutakura chinotendwa nevatengi.
Kurasikirwa zvishoma nezvishoma kwevatengi kwakamutsa kusvinura kwemakambani ezvinwiwa anga achishandisa mabhodhoro epurasitiki kuputira. Vamwe vagadziri vanoona zviri kure vakasiya mabhodhoro epurasitiki ndokuchinjira kugirazi remabhodhoro. Kunyangwe ichawedzera mutengo wechigadzirwa pakutanga, musika unenge uine imwe nguva yekugadzirisa. Kufungisisa kwenguva refu kwakakosha. Kana makambani echinyakare achida kuhwina musika kwenguva yakareba, anofanirwa kushandura uye kungochinjika. Mwoyo yevanhu inogona kuhwina musika. Icho chikonzero nei girazi kurongedza richizohwina zvishoma nezvishoma chikamu chakakura chemusika wemugove uye kufarirwa nemakambani ekupakata anofanirwa kuve nezvakanakira.
Rega ndiunze kwauri kuti ndeapi mabhenefiti egirazi regirazi kurongedza.
(1) Iyo girazi zvinhu ine lead-yemahara uye isingakuvadzi zvivakwa, uye zvakare ine yakanaka yekudzivirira zvivakwa, iyo inogona kunyatso kudzivirira iyo oxidation uye kukukurwa kwezvinhu zviri mubhodhoro nemagasi akasiyana siyana, uye inogona kunyatso kudzivirira kusagadzikana kwezviri mukati. Izvo zvinongedzo zvinoshanduka zvichipinda mumhepo;
(2) Mabhodhoro egirazi anogona kudzokororwa uye kushandiswa kakawanda, zvichideredza mutengo wekutakura kwemabhizinesi;
(3) Iyo yakajeka girazi dhizaini inogona kudzora zviri nyore ruvara rwezviri muhombodo. Girazi bhodhoro renyika yangu chinwiwa kurongedza mudziyo, girazi zvakare rudzi rwekuputira zvinhu zvine nhoroondo refu. Nemidziyo mizhinji yekupakata ichidira mumusika, midziyo yegirazi ichiri kutora chinzvimbo chakakosha mune yekumwa chinwiwa, icho chisingapatsanurike kubva pamapakeji ayo ayo zvimwe zvekutakurisa zvinhu zvisingakwanise kutsiva.
(4) Bhodhoro regirazi rakachengeteka uye riine hutsanana, harikuvadzi uye harikuvadzi, rine ngura yekudzivirira uye nemishonga yeasidhi ngura, uye ine yakakosha kurongedza zvakanakira iyo indasitiri yewaini, indasitiri yemukaka, indasitiri yemafuta inodyiwa, indasitiri yezvinwiwa, nezvimwewo, kunyanya yakakodzera acidity. Zvinhu, zvakadai semuriwo uye chinwiwa, zvinodyiwa vhiniga kurongedza;
(5) Uye zvakare, nekuti mabhodhoro egirazi akakodzera kugadzirwa kwemabhizinesi 'otomatiki ekugadzira mitsara, kuvandudzwa kwemombe yegirazi bhodhoro otomatiki yekuzadza tekinoroji nemidziyo zvakare kune vakura, uye girazi regirazi kurongedza rine rakakura kwazvo kugadzirwa mukana mudzimba nemisika yekunze.
Muhupenyu hwedu, hwahwa chinwiwa chakakurumbira nekuti dhigirii yacho haina kunyanya kukwirira, uye inonaka kutsetseka uye inonaka, uye hazvisi nyore kudhakwa kana ukainwa. Panguva imwecheteyo, hwahwa hwakazadzwa nemamwe matubvu. , Inoita kunakirwa zvirinani, uye ine yakawanda yekuita pamuromo werurimi, saka mushure mekupinda munyika medu, waini yakakurumidza kubata vechidiki. Musika wedoro wave kudiwa nevechidiki vazhinji, asi kana iwe uchida kuendesa doro kunzvimbo dzakasiyana rinofanira zvakare kupaka zvakasiyana. Pane maviri akajairika kurongedza doro pamusika, imwe doro mumabhodhoro egirazi, uye imwe iri doro mumakani. Ndeupi musiyano uripo pakati pezviviri izvi? Pakutanga, vechidiki vazhinji vanofanira kunge vakafunga kuti hapana musiyano pakati pezviviri, nekuda kwekuti zvinhu zvacho zvakasiyana. Muchokwadi, kana iwe uchiziva chikonzero chiri shure kwayo, zvinofungidzirwa kuti haugone kutenga doro risiri iro kana ukanwa doro mune ramangwana.
Isu tese tinoziva kuti makore gumi nemaviri kana apfuura pasati pave nehucheche hwevanhu vese, magaba mazhinji pamusika aisanyanya kufarirwa, saka musika wedoro waive pamusika panguva iyoyo, girazi remabhodhoro egirazi raive rakakurumbira, uye mumakore gumi apfuura, makani zvishoma nezvishoma kutsiva girazi rinogona doro. Mumashefu ezvitoro kana zvitoro, tinowanzoona doro mumakani. Nekuda kwemutengo wayo wakaderera, kurema kureruka, nyore kutakura, inogona kuchengetedza hunyoro zvirinani panguva yekufambisa, saka magaba edoro anozivikanwa pakati pevanhu vazhinji. Akatsvaga mushure.
Asi kana iyo yekurima yekugadzira sisitimu ikaenda kune epamusoro-magumo ekugadzira mabhawa, iwe unowana ese marudzi edoro pamashefu, angangoita ese ari mabhodhoro egirazi, uye hauwanzo kuona doro mumakani, saka parizvino doro mumabhodhoro egirazi Iro. rave zvakare rakafanana nedoro remhando yepamusoro. Chii chiri kuitika? Zvinoitika kuti doro rinotanga kuviriswa kubva pagirume regorosi, saka kabhoni dhayokisaidhi kana nitrogen inowedzerwa kumanikidza pakuzadza, uye oxygen iri mubhodhoro inosunungurwa zvakanyanya sezvinobvira.
Naizvozvo, kubva kuzvinhu zvemagaba nemabhodhoro egirazi, tinogona kuona kuti kumanikidza kupi kuri nani. Ukobvu hwakajeka hwebhodhoro regirazi rakakura uye rakasimba kudarika magaba. Iko kumanikidza kwainogona kutakura kwakakura kwazvo kupfuura kuya kwemakani. , Kana kumanikidza kuchiwedzerwa, kumanikidza kwepamusoro kunogona kuwedzerwa, kuitira kuti mhando yedoro igone kuchengetedzwa zviri nani. Zvakare, girazi pakutanga chinhu chine kugadzikana kwemakemikari zvivakwa, uye hazviite chemakemikari nedoro riri mubhodhoro. Nekudaro, magaba anowanzo kuve akagadzirwa nealuminium-iron alloy sezvinhu zvakagadzirwa. Zvimwe zvinogona kuitika pavanosangana nedoro. Mukupindura, nekufamba kwenguva, iko kunhuhwirira kwedoro kunozoitika shanduko huru kwazvo, zvichiita kuti doro racho riravire zvakashata uye kunyange nesimbi.
Saka kana tikanwa doro kungoitira nyore uye nekukasira, uye kwete kune avo vane hupfumi hwakakosha, pasi pemamiriro ezvinhu akajairika, tinosarudza doro remumagaba, nekuti hatina kutsvaga kwakanyanya mhando yehwahwa, uye hatinwe zvakanyanya. Iva kunyanya kufunga. Nekudaro, kana iwe usinga funge huremu uye kutakurika, kubva pakuona kwekuravira kwedoro, doro mumabhodhoro egirazi riri nani pane doro riri mumakani. Naizvozvo, kana isu tichida kuravira hunhu uye chirevo chedoro, zviri nani kusarudza mhando yepamusoro doro mumabhodhoro egirazi.